Naselokishini akhona amabhizinisi amile – Bayede News
Naselokishini akhona amabhizinisi amile
Eminyakeni ebalelwa emashumini amathathu edlule
UMnu uSthembiso Makhanya
Eminyakeni ebalelwa emashumini amathathu edlule kwenzeka umonakalo ongakhohleki lapha kwasha kwangqongqa amabhizinisi asemalokishini, ikakhulukazi aseMlaza, KwaMashu naseMpumalanga.
Kwabaningi laphela ithemba lokuthi kuyoke kuphinde kube khona ibhizinisi eliyokuma elokishini.
Izitolo okwakungezaboHlanga zaphela kwadingeka ukuba abantu baye ezindaweni ezingamadolobha aseduze uma befuna ukuthenga.
UMnumzane uSthembiso Makhanya unebhizinisi elikhiqiza izinhlobo ezahlukene zokuhlanza, kusukela kwezasekhaya kuya kulezo ezisetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene ezinkulu.
Igama lale nkampani e kuthiwa yiThemzak Group (Pty) Ltd kanti lona lisebenzela eMlaza kwa-V elokishini. Kunikeza umdlandla ukubona ibhizinisi lowoHlanga eselisebenze eMlazi iminyaka engamashumi amabili nantathu.
Usewungoti kulo mkhakha wamakhemikhali anhlobonhlobo. Izikole namasonto namakhaya kusizakala kakhulu ngokuba khona kwale ndawo ekhiqiza imikhiqizo eyilolu hlobo.
Ulisungule leli bhizinisi ngolwazi ayeluzuze esikoleni waluhlanganisa nalolo aluthola enkampanini ayesebenza kuyo, wabe esenquma ukusebenzisa lolu lwazi ukusungula eyakhe inkampani ekhiqizayo.
Uma ungena endaweni asebenzela kuyo kuyacaca ukuthi kuyasetshenzwa kule ndawo, uma ubona amathangi ajwayeleke ezindaweni ezingamadolobha.
Uma ukhuluma naye kuyacaca ukuthi uyakholelwa ekusebenzeni futhi kungabi bikho mahluko ukuthi leli bhizinisi liselokishini, abanye besebenzela emadolobheni, lapho zonke izinto ziseduze.
Kula mathangi yilapho kuhlanganiswa khona izithako ezinhlobonhlobo ezikhipha imikhiqizo edayiswa ezinkampanini ezinkulu ngoba phela ihloliwe.
Uma ekuchazela ngekhwalithi uyaye uzibonele ukuthi uqinisekile ngento ayenzayo, lapho ubona izigxivizo nezitifiketi ezikhombisa uphawu lweSouth African Buereau of Standards.
Phela lolu phawu lucacisa ukuthi lowo mkhiqizo uhloliwe, futhi ungasetshenziswa noma yikuphi ngoba awunabungozi.
Uma echaza ubuhle bokusebenza elokishini, akakushiyi ukuthi kumnandi ukusebenza endaweni okhulele kuyo, futhi enabantu obajwayele. Kodwa izinselelo zokuba selokishini nazo azisali.
Phela ababaningi abasebenzela elokishini bebe besezingeni lomhlaba. Lokhu kuletha izinselelo zokuxhumana nabanye abasezingeni lakho. Izithako zemikhiqizo zitholakala endaweni eyidolobha, ngakho-ke kumele aphume elokishini ukuze athole izithako zokwakha imikhiqizo yebhizinisi. Enye yezinselelo ngeyokuthi amabhange akazethembi izindawo ezakhelwe ngaboHlanga. Lokho kwenza kube lukhuni satshe ukukhulisa ibhizinisi. Ukuzazisa kuba yinkinga, ikakhulukazi ngoba abanikazi bezinkampani ezinkulu abajwayele ukuza elokishini, badela ngokuzibonela imikhiqizo eyakhiwe elokishini.
Uselihambile ibanga kule nkampani ngoba imikhiqizo waze waba nesizinda sokuyikhangisa esibizwa kanje: www.themzak.co.za. Baningi abangasizakala ngokusebenzisana nokuthola imikhiqizo kule nkampani. Kulolu hambo aseluhambile ebhizinisini umfo kaMakhanya uyakukhuthaza ukulalela izinto ezenzekayo emabhizinisini amanye, nezinsiza ezivela ezinhlanganweni ezehlukene, kanye nakuHulumeni. Lokho kuyamsiza umuntu akhule. Inkampani yakwaThemzak isakhula noma seyiqede iminyaka engaphezu kwamashumi amabili.